Prakash Khabar:: निगमलाई चुस्ने काम मात्र भइरहेको छ उडानको आम्दानीले निगम चलेको छैन – पहाडी Prakash Khabar
निगमलाई चुस्ने काम मात्र भइरहेको छ उडानको आम्दानीले निगम चलेको छैन – पहाडी
December 12, 2019 | 654 Views
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिको बैठक लगातार सोमबार विहानसम्म चलेको थियो । पाँच दिन भन्दा बढी चलेको बैठकले बढुवा भएका कर्मचारीको फाइललाई पारित गर्यो । भने अन्य कुनै ठोस एजेण्डामा सहमति हुन सकेन । साउदी उडानका लागि एजेन्ट तोक्ने काम समेत थाती रहेको छ । संचालक समितिको बैठक सकिए लगतै कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल एक साता लामो विदामा बसेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराई आए देखि नै खरेल विदा बस्नेक्रम बढेको छ ।
सो बैठकमा साउदीमा जिएसएस तोक्ने विषयमा संचलक समितिको बैठक खरेल र अर्का सदस्य अच्यूत पहाडीबीच मत बाझेको छ । चार जनाको संचालक समितिमा खरेल समेत तीन मत रहदा पनि साउदीमा जिएसएस तोक्ने काम भएन । जिएसएसका लागि अल महरा र ताज कम्पनीको ट्राभल एजन्सी नै नभएकोले दिन नमिल्ने भनि खरेलले जोड दिएका थिए । पहाडीले अल महरा कम्पनीलाई दिनुपर्छ भनेकोमा ७८ प्रतिशत मात्र सिट भर्ने प्रस्ताव ल्याएको भनि खरेलले नमानेको शुत्रको दावी छ । यही एजेण्डामा चार संचालक मध्ये पहाडीले नोट अफ डिसेन्ट लेखी सही गरेका छन् । ताजको पक्षमा वहुमत भएपनि तोक्ने काम भने गरिएको छैन । यही लफडाले साउदीको उडान भर्ने काम पछाडि धकेलिएको छ ।
कानुनी रुपमा ताजलाई दिन मिल्दैन । जहाजको पनि समस्या छ । साउदीमा कुन जहाज लिएर उडाउने ? ट्राभल एजेन्सी नै नभएको र कुनै लेवल नभएको कम्पनीलाई जिएसएस कसरी दिन मिल्छ । त्यहाँको एयरपोर्टमा अफिस राख्ने नराख्ने भन्ने सम्म टुङ्गो हुनु पर्यो भनी संचालक सदस्य पहाडीले बताएका छन । उनले वहुमतको निर्णय गरेको हुने भए किन नगरेको हो ? हुन सक्छ अध्ययनको कमि देखेर वा अन्य कारणले हो अन्त्यमा आएर क्यान्सील भयो भनि बताएका छन् ।
निगमसँग ५२ अर्बको सम्पती रहेको भनाइ रहेको छ । अहिलेको ३८ अर्ब घाटाको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चमा समेत घाटा छ । यसले घाटा बढेको गइरहेको अवस्था छ । दुईवटा वाईडबडीको २५ अर्ब ऋणको किस्ता र ब्याज बढेर गएको छ । ब्याज १०.५ प्रतिशत रहेको छ । पहाडीका अनुसार जहाज उडानको आम्दानीले घाटा छ । तर निगमलाई हाल सम्म ग्राउण्ड हयाण्डलीङको आम्दानीले धानेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नभएसम्म निगमको सुधार हुँदैन । नेपाली व्यवस्थापनबाट निगम चल्न सक्दैन उनी भन्छन् । यस्तै निगमलाई चाइनिज जहाजहरु समस्या हो । इन्सुरेन्स महँगो पर्छ । मेनेजमेन्ट लागत महँगो छ र स्पेयर्स पार्ट समयमा पाइन्न । एउटा जहाज नियमित ग्राउण्ड गर्नुपर्छ । समयमा पार्टस नपाएर त्यसको खोलेर आवश्यक परेकोमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पयर्टन मन्त्री योगेश भट्टराई र निगमको कार्यकारी कार्यकारी अध्यक्ष खरेलबीच कुनै कुरामा तालमेल छैन । मन्त्री भट्टराई निगम व्यवस्थापनले काम गर्न नसकेको बताइ रहदा निगम व्यवस्थापनले मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्दासम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ छैन । निगममा जो आएपनि मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक छ र राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । यो स्थीति मन्त्री र निगम व्यवस्थापन हाँसीखुसी हुँदासम्म रहने हो । त्यसैले आजको स्थितिमा निगमको सुधारको विषय धेरै टाढाको बनेको छ ।
सहज र चल्तीका गन्तव्यमा निगम भित्रैबाट निजी हवाइ कम्पनीहरुलाई टिकेटिङ र मार्केटिङको सहयोग हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । यदी यो साँचो भए यसमा छानविन हुनै पर्छ । कम्पोनेन्ट सर्पोट र ईन्जिन लिजमा लिने कानुनी प्रकृयाबाट टुङ्गिने विषयमा लेखा समिति हुँदै सर्वोच्च पुगेको छ । तर, निगम व्यवस्थापनले त्यसको बदलामा सामान्य टेण्डरबाट करोडौको सौदावाजी गरिरहेको छ । यसरी निगमलाई आजको दिनमा चारैतिरबाट टोक्न, चिमोट्न, चिथोर्ने र चुस्ने काम भएको छ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ ।